ထောင်ထဲမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရသအတွက် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အကူအညီတောင်းခံလိုက်တဲ့ ယုန်လေ – အနုပညာရပ်ဝန်း
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်သလို ဒါရိုက်တာအဖြစ်လည်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဆိုတော်ယုန်လေးကတော့ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို လိုအပ်နေသူတွေအတွက် အမြဲသင့်ရှိကာ ကူညီပေးတတ်တဲ့ မွန်မြတ်ကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်နှလုံးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ယုန်လေးကတော့ လှူဒါန်းမှုတွေကို မကြာခဏလုပ်ဆောင်နေတာ တွေ့ရပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ မပြေလည်သူတွေကိုလည်း အမြဲရှေ့ထွက်ပြီး တတ်နိုင်သလောက် အမြဲကူညီတတ်သူမို့ ပရိသတ်တွေကလည်း အခုနောက်ပိုင်းမှာ ပိုပိုပြီး ချစ်ခင်အားပေးလာကြပါတယ်နော်..။
အခုတစ်ခါမှာလည်း မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းက အပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရပြီး ထောင်ထဲမှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံတွ့နေရတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူရသအတွက် ယုန်လေးတစ်ယောက် စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ နေပါတယ်..။
ညတွင်းချင်းထောင်ပြောင်းပြီး အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရသအတွက်အပြင် အသက်အရွယ်အိုမင်းနေပြီဖြစ်ပေမယ့် သားဖြစ်သူအတွက် စိတ်သောကရောက်ပြီး ငိုနေရရှာတဲ့ ရသရဲ့မိဘတွေအတွက်ပါ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ပြောပြရင်း သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအတွက် အကူအညီလေး တောင်းလိုက်ပါတယ်နော်..။
“ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေထဲ မှာ သည်းခံ အတတ်ဆုံး
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ရသကို မှတ်မိသေးကြလား.. မူးယစ်ဆေးဝါး လုပ်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရတယ် . စိတ်မကောင်းဖူးပေါ့.. အခု ဒီထက်ပို ကြေကွဲ စရာက .. 2000 ခုနှစ်က ရသ ကအဆင်ပြေပါတယ် .အခု အဆင်မပြေဖူး . အဖေ အမေ တွေလည်း အသက်ရွယ်တွေ ရနေကြတော့ ထောင်ဝင်စာ သွားမတွေ့နိုင်ဘူး.. ပိုက်ဆံလေးပဲ လွှဲပြီး နီးစပ်ရာနဲ့ ထောင်ဝင်စာ ပို့ပေးရတာ .. တစ်လ တစ်ခါ ထောင်ဝင်စာ အတွက် ကျွန်တော် လစဉ် တတ်နိုင်သလောက် ကူဖို့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်.. ထောင်ဝင်စာ မလာတဲ့ လူဆို ဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်.. ဘယ်လောက် ဖိနှိပ်ခံရတယ်ဆိုတာ ထောင်ကျဖူးတဲ့ လူတိုင်းသိပါတယ်.. အိုးဖိုထောင် က ထောင်ပိုင်ကြီးကတော့ ကောင်းပါတယ်.. အခု အဆင်မပြေတဲ့ သောကတွေကြားထဲက ဒုထောင်ပိုင် ရဲ့ လုပ်ရပ်ချက် အထာမထားချက် မနက်မှတောင် မဟုတ်ဘူး .. ညတွင်းချင်း ထောင်ပြောင်းထည့်လိုက်တယ်.. မြင်းခြံထောင်တဲ့ တခြား လူတွေတောင် မနက်မှ အေးအေးဆေးဆေး ပြင်ဆင်ပြီးပြောင်းရတာပါ.. မြင်းခြံ ထောင်ကြောင့် ဘာကြောင့် မဟုတ်ဘူး.. နေသားကျတဲ့ တစ်နေရာက နောက်တစ်နေရာ ထပ်ရွေ့တဲ့ အခါ အဆင်မပြေမူ့တွေ အများကြီးရှိပါတယ်..” ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရသရဲ့ အခက်အခဲလေးတွေကို ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
“သူအမေ နဲ့ အဖေ မှာ ထိုင်ငိုပြီး
သောကပို ရောက်တော့တာပေါ .
ကျွန်တော့်ကိုလည်း ဖုန်းထဲမှာ ငိုပြီးရင်ဖွင့်သွားတာ
ကျွန်တော်လည်းအရမ်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ .
မြင်းခြံမှ ထောင်ပိုင်ကြီးကိုလည်း ကျွန်တော့်တို့ သူငယ်ချင်းကြီး ရသကို ကြည့်ပြီး စောင့်ရှောက်ပေးဖို့
တောင်းဆိုပါတယ် ခင်များ .
က့နြျတောျတို့ သူငယျခငြျး ရသအတှကျ .
ကျွန်တော်တို့တွေ တက်နိုင်သလောက် ဝိုင်းကူကြရအောင်
အယူခံ တွေလည်း မလိုက်နိုင်လို့ .
နိုင်ငံတော်လည်း မပါခဲ့ပါဘူး .
အထဲမှာ အနေအစားလည်း ကျပ်တည်းခဲ့ပါတယ် .
ကူညီမယ့် အနုပညာ ညီအစ်ကို မောင်နှစ်မများ ဆက်သွယ်ပေးပါခင်များ . . . . တကယ်ကြီးကို အကူညီ လိုနေတာပါ . ရသ သီချင်းကောင်းတွေ အများကြီးပါ .
ယူသုံးပေးကြပါ . ယူဆိုပေးကြပါ ရသ အမေနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပါ့မယ်ခင်များ ဒါလည်း ကူညီရာ
ရောက်ပါတယ် ခင်များ..” ဆိုပြီးတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူအတွက် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ အကူအညီလေးလည်း တောင်းထားပါသေးတယ်နော်..။